Muxuu yahay rikoorka uu xalay jabiyey Kabtanka Argentina ee Lionel Messi? – Gool FM
Muxuu yahay rikoorka uu xalay jabiyey Kabtanka Argentina ee Lionel Messi?
(Brasilia) 29 Juun 2021. Lionel Messi ayaa xalay taariikh ka sameeyey kulankii uu u ciyaaray xulkiisa Argentina ee Copa America, isagoo jabiyey rikoorkii safashada xulka.
Kaddib markii uu ku soo bilowday safka hore ee kulankii xalay xulkiisu wajahay Bolivia, Lionel Messi ayaa jabiyey rikoorkii safashada ee xulkiisa Argentina oo uu hore u haystay Javier Mascherano.
Kabtanka Barcelona ee Leo Messi waxa uu noqday kan ugu safashada badan haatan xulkiisa Argentina isagoo u saftay xalay 148 kulan, waxaana uu ka sare maray Mascherano, kaasoo xulka u saftay 147 kulan.
Kaddib markii uu saftay kuna soo bilowday safka hore kulankii ugu dambeeyey heerka guruubyada Copa América oo uu xulkiisu xalay wajahay Bolivia, waxa uu dhaafay xiddiga ay isku kooxda soo noqdeen, isku xulkana yihiin ee Javier Mascherano kaddib markii uu Messi qarankiisa u saftay 148 kulan.
Kabtanka Argentine ayaa weli ku raad-jooga inuu koob weyn kula guuleysto xulkiisa qaranka, iyadoo sidoo kale ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo ku aaddan mugdiga hareeyey Mustaqbalkiisa Barcelona.
Si kastaba ha noqotee, kaddib markii uu matalay Xulkiisa Argentina markii 148-aad, 34-sano jirkaan ayaa sidoo kale haatan ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda Argentina isagoo u dhaliyay 73 gool.
Kylian Mbappe oo raali-gelin ka bixiyey rigooradii uu xalay ka khasaariyey xulkiisa Faransiiska